Tag: ecommerce moobiilka | Martech Zone
Tag: ecommerce moobiilka
Sidee Xawaaraha Goobtu Saameyn Ugu Leeyahay Heerarka Is-Beddelka Macaamiisha Mobilada
Arbacada, Agoosto 5, 2020 Arbacada, Agoosto 5, 2020 Douglas Karr
Waxaan isku darnay barnaamij abaalmarin ah waxaanna soo saarnay dhowr qalab casri ah oo shaqsiyadeed oo casriyeysan oo loogu talagalay macmiilka elektaroonigga ah oo si weyn kor ugu qaaday dakhligooda. Markii aan sii wadnay inaan daawanno dadka isticmaala ee ka imanaya emaylka iyada oo loo marayo beddelaad, waxaan ku ogaanay dhowr arrimood oo ku saabsan martigelintooda iyo barnaamijkooda kuwaas oo si weyn u saameynaya xawaaraha goobta - jahwareerka macaamiishooda suurtagalka ah iyo kor u qaadista heerarka ka tagista kor - gaar ahaan qalabka moobiilka. Maxay Sababta Xawaareynta Page Waa muhiim in laga shaqeeyo suuqgeynta
5 Naqshadaha Naqshadeynta ee sida wanaagsan ugu shaqeynaya Beddelka Moobilka
Monday, July 17, 2017 Axad, Juun 10, 2018 Douglas Karr
In kasta oo ay kordheen isticmaalka mobilada, degello badan ayaa bixiya khibrad moobiil oo liidata, taas oo ku qasbeysa macaamiisha mustaqbalka in ay ka baxaan goobta. Milkiilayaasha meheradaha ee hadda uun bartay inay dhex socdaan miiska desktop-ka ayay ku adag tahay inay u wareegaan moobiilka. Helitaanka sharraxaadda saxda ah oo keliya ayaa dhib noqon kara. Milkiilayaasha meheraddu waa inay si adag u shaqeeyaan si ay u fahmaan bartilmaameedyadooda bartilmaameedka una dhisaan qaab-dhismeedkooda iyo naqshadeynta agagaaraha qofka iibsadaha ah. Rafcaan qaadashada macaamiisha mustaqbalka marwalba way fududahay
Qorshe 5-Tallaabo ah oo lagu Kicinayo Goobahaaga Dukaamaysatada.
Talaado, Juun 13, 2017 Monday, June 12, 2017 Tom Mucklow
Sida laga soo xigtay Statista, 2016, 177.4 milyan oo qof ayaa aaladaha mobilada u adeegsaday dukaan, cilmi baaris iyo dhirtuba alaabooyinka. Tiradan ayaa la saadaalinayaa inay gaarto ku dhowaad 200 milyan sanadka 2018. Warbixin cusub oo ay soo saartay addressy ayaa lagu sheegay in ka tagida gaadhiga ay gaadhay heer dhexdhexaad ah oo ah 66% Maraykanka. Tafaariiqleyda khadka tooska ah ee aan bixin waayo-aragnimo moobiil oo weyn waxay u badan tahay inay ku seegaan ganacsiga. Waa lama huraan inay ku sii hayaan dukaamaysanayaashu inay ku mashquulsan yihiin dhammaan nidaamka lacag-bixinta. Hoos
Waxaan la shaqeyneynay fiitamiin iyo dukaan dheeri ah si aan gacan uga geysano kordhinta muuqaalkooda raadinta iyo heerarka beddelashada. Kaqeybqaadashadu waxay qaadatay waqti iyo xoogaa xoogaa ah, laakiin natiijooyinka ayaaba bilaabay inay muujiyaan. Goobtu waxay u baahnayd in dib loo habeeyo oo dib loo naqshadeeyo sagxadda kor. In kasta oo ay ahayd goob si buuxda u shaqeyneysay hadda kahor, haddana ma aysan lahayn waxyaabo badan oo lagama maarmaan u ah dhisidda kalsoonida iyo fududeynta is-beddelka
La Wareegista Suuqgeynta Mobaylka
Taleefanada gacanta waxay ahaan jireen kuwa innaga shisheeya dhammaanteen, haddana haddana gebi ahaanba waa meel caan ah. Telefoonada casriga ah ayaa ka horumarsan kana fal-gal badan sidii hore, walina waxaa jira horumarro cusub oo xiiso leh oo ay u socdaan shirkado badan oo waaweyn. Marka ay timaado calaamadeynta iyo xayeysiinta waxaa muhiim ah in la ogaado sida loola xiriiro dhagaystayaasha moobiilka sidoo kale dadka isticmaala kumbuyuutarka si fiican ayey u yaqaanaan. Shirkadda 'Surge Digital' waxay la timid macluumaad cusub oo cusub